itnadamtui: window7DVD တစ်ချပ်ရလာဖို့ ဖိုင်ဖြေနည်း
window7DVD တစ်ချပ်ရလာဖို့ ဖိုင်ဖြေနည်း
ရလာတဲ့ဖိုင်တွေကို select all (ctrl+a) ပေးပြီး right click >> properties နှိပ်လိုက်ပါ . (2.14 GB) ရှိရပါ့မယ် . မရှိရင် မရပါဘူး . မရှိရင် ဖိုင်တစ်ဖိုင်ဖိုင်ဟာ download လုပ်နေရင်းနဲ့ ပြုတ်ကျသွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် . (2.14 GB) မရှိရင် တစ်ဖိုင်ချင်းစီကို right click ထောက်ပြီး လိုက်ကြည့်ပါ . (part-1) ကနေ (part-46) အထိ တစ်ဖိုင်ကို (47.6 MB) စီရှိရပါ့မယ် . မရှိတဲ့ဖိုင်ရှိရင် အဲ့ဒီ့ အပိုင်းကို ပြန်ပြီး download လုပ်ပါ . ဖိုင်ပြန်ဖြေဖို့ နှင့် DVD တစ်ချပ်ရလာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ
အပေါ်က အားလုံးအိုကေပြီဆိုရင်တော့ part(1) ကို right click ထောက်ပြီး extract here ကို နှိပ်လိုက်ပါ iso file တစ်ဖိုင်ရလာပါလိမ့်မယ် .ရလာတဲ့ iso ဖိုင်ကို double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ . nero နဲ့ burn မှာလားလို့ မေးလာပါလိမ့်မယ် . burn ကို နှိပ်လိုက်ပါ . DVD room က DVD ထည့်ဖို့အတွက် . ထွက်လာပါလိမ့်မယ် . ဘာမှမရှိတဲ့ DVD တစ်ချပ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ . သူ့ဟာသူ burn နေပါလိမ့်မယ်။
Indsendt af itnadamtui kl. 12.49